SMT PCB Assembly - PCBFuture
Okwu okwu: SMT Assembly, PCBA prototype, SMT PCB assembly, PCB SMT
Dị ka ọkachamara PCB nzukọ emeputa, na anyị nwere ihe karịrị afọ iri na mgbakọ SMT PCB. Anyị na-agba mbọ iji na-egbo mkpa nke ndị ahịa anyị si dị iche iche ọrụ na okwu nke àgwà, nnyefe, na-eri-irè na PCB ngwọta. Ọzọkwa nye pụrụ iche ahaziri ọrụ. Anyị hazie PCB gị mmefu ego na-azọpụta gị oge na-akpata ahịa.
Ntak-ahọrọ anyị SMT PCB nzukọ?
1.24-hour online see okwu.
2. Ngwa ngwa 12-hour ọrụ maka PCB prototype.
3. Ọnụ ọnụ na ịsọ asọmpi.
4. Nnwale arụmọrụ na-adabere na ihe ndị ahịa chọrọ.
5. Ndị otu ọrụ anyị nwere ntụkwasị obi ma nwee ntụkwasị obi na - eme ka ọ dịrị gị mfe ịtọlite ​​ma ọ bụ dozie nsogbu. Nke a bụ ihe anyị chọrọ iji mejuo ndị ahịa anyị. Anyị na-enye a zuru set nke ọrụ site circuit imewe ka okokụre ngwaọrụ maka biri ebi circuit. Anyị na-enwe obi ụtọ mgbe niile ịnye gị ọrụ ndị mbụ.
6. Afọ 10 nwere ahụmịhe na mpaghara mpaghara Elektrọnik.
7. Anyị na-anapụta gị PCBs ozugbo na ngwa ngwa mgbe imecha si factory.
8. orylọ ọrụ SMT a pụrụ ịdabere na ya na usoro SMT 8, 100% Nlekọta Ọrụ, Mmepụta Prototype, Ngwọta Na-arụpụta Ihe.
Anyị nwere ike inye?
1.Prototype PCB nzukọ
2.dobe kwadoro PCB nzukọ
3.multi-oyi akwa PCB nzukọ
4.aluminium PCB nzukọ
5.Flexible PCB nzukọ
6. Ndenye Turn PCB nzukọ
7.Turnkey PCB nzukọ
8. SMT stencil mere nke ígwè maka laser-ịkpụ solder tapawa Mbipụta.
Usoro nke SMT PCB Assembly:
Usoro nke iji SMT iji rụpụta ngwaọrụ PCB gụnyere iji igwe akpaghị aka iji kpokọta akụrụngwa eletriki. Igwe a na-etinye ihe ndị a na bọọdụ sekit, mana tupu nke ahụ, a ga-enyocha PCB faịlụ iji gosi na ha enweghị nsogbu na-emetụta nrụpụta na arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ. Mgbe-egosi na ihe niile zuru okè, usoro nke SMT PCB nzukọ na-ejedebeghị na soldering na ịtụkwasị ọcha ma ọ bụ ogige na PCB.A ga-agbaso usoro mmepụta ihe ndị a.
1. Tinye solder tapawa
Nzọụkwụ mbụ mgbe ị na-achịkọta bọọdụ SMT PCB na-etinye ntinye mado. Enwere ike itinye pasta ahụ na PCB site na teknụzụ silk. Enwere ike itinye ya n'ọrụ site na iji stencil PCB ahaziri site na faịlụ mmepụta CAD yiri nke a. Only na mkpa ibelata stencil iji laser na itinye soldering tapawa na akụkụ ebe ị ga-solder na mmiri. A na-etinye ngwa ngwa solder solder na gburugburu ebe dị jụụ. Ozugbo ịmechara, ị nwere ike ichere oge maka mgbakọ.
2. Nnyocha nke solder tapawa
Mgbe solder mado na-etinyere na osisi, nzọụkwụ ọzọ bụ mgbe niile na-elele ya site solder tapawa nnyocha usoro. Usoro a dị oke egwu, ọkachasị mgbe ị na-enyocha ọnọdụ ebe a na-ere ya, ego ejiri ya rụọ ọrụ, yana akụkụ ndị ọzọ dị mkpa.
3. Nkwenye usoro
Naanị ma ọ bụrụ na PCB gị na-eji SMT components n'akụkụ ọ bụla, ọ ga-adị mkpa ịtụle ịmeghachi otu usoro maka nkwenye nke abụọ. ị ga-enwe ike soro ezigbo oge iji kpughee solder tapawa ka ụlọ okpomọkụ na ebe a. Nke a bụ mgbe gị sekit osisi dị njikere na-kpọkọta. Ihe ndị mejupụtara ya ga-adị njikere maka ụlọ ọrụ na-esote.
4. Mgbakọ mgbakọ
Nke a metụtara BOM (Bill of Materials) nke CM jiri maka nyocha data. Nke a na-eme ka mmepe nke ngwa mgbakọ BOM rụọ ọrụ.
5. Ngwa nchekwa na ihe
Jiri akara ngosi iji dọpụta ya na ngwaahịa ma tinye ya na ngwa mgbakọ. Mgbe arụnyere ihe ndị ahụ na ngwa ahụ, a na-akpọrọ ha gaa na igwe na-etinye igwe ebe a na-akpọ teknụzụ ugwu.
6. Nkwadebe nke mmiri maka ọnyịnye
Ngwunye na ebe a na-arụ ọrụ ebe a iji jide mmewere ọ bụla maka mgbakọ. Igwe ahụ na-ejikwa katrij nke na-abịa na igodo pụrụ iche kwekọrọ na ngwakọta mgbakọ BOM. Emebere igwe ahụ iji gwa akụkụ ahụ katrij ahụ jidere.
Usoro nzukọ SMTna-agbanwe PCB n'ichepụta usoro na-ewere ya na-esonụ larịị. Nke a bụ teknụzụ na-efu ego, ịrụ ọrụ nke ọma na ntụkwasị obi maka ịmepụta PCBs. Naanị ihe a tụrụ anya n’ọdịniihu bụ mmelite n’ezie nke teknụzụ SMT PCB dum ebe ọ bụghị usoro dị mfe. Ozi ọma ahụ bụ na ọbụna taa, ị nwere ike ịnweta mbadamba PCB a pụrụ ịdabere na ya na ọnụ ọnụ ọnụ. Ka o sina dị, ọ bara uru ịkpọtụrụ onye injinia ma ọ bụ onye nrụpụta a pụrụ ịdabere na ya na ngwa ọrụ na ahụmịhe dị mma iji zute ihe ndị ị chọrọ. Iji nyere gị aka ịghọta onye nrụpụta kachasị mma, ịnwere ike ịtụle iji ngwa ọgbara ọhụrụ, akụrụngwa mbụ, ọnụ ahịa dị ọnụ, na ndị nrụpụta na-ewepụta oge.
Ozi PCBFuturebu inye ulo oru ihe eji eme PCB nke kwesiri ntukwasi obi na oru nzuko site na ihe omuma ka imeputa ya. Ebumnuche anyị bụ inyere onye ọrụ ọ bụla aka ịghọ onye ọrụ zuru oke, onye na-eme ọtụtụ ọrụ nwere ike iji obi ike mee ka echiche injinia dị ọhụrụ, nke dị oke mkpa iji rụọ ọrụ ọ bụla dị mkpa, nsogbu, na teknụzụ.